Walter Heyer: Transgender Regret | CAADI
Walt Heyer - Transgender hore.
Walt wuxuu hayaa sheeko noocan oo kale ah. Naqshad jahawareer iyo jahawareer jinsi ah oo ka dhasha jahwareer galmo iyo nabaad guur.
Walt wuxuu ku dhacey dariiqa transgender inuu ku noolaado naag ahaan 10 sano ku dhawaad. Jahawareerku wuxuu baabi'inayaa meherad lagu guuleysto iyo nolosha qoyska.
Ugu dambeyntii Walt ma qaadan karin khilaafka gudaha mar dambe. Waxay ka tagtay nolosha transgender ama dhimato. Walt dooran nolosha. Waxaad ka heli kartaa bogagga Walt buugaagta iyo websaydhka taageerada boggan.
Tijaabada Caruurteena: Dhakhaatiirtu Ma Garan karaan cidda loo yaqaan 'trans Trans Real' Caruurta.
Dhakhaatiirtu hadda ma haystaan ​​qaab saadaalin ah taas oo ah carruurta disha labka dheddigga ah ee ku sii jiraya dysphoria-da dheddigga, haddana weli waxay ku riixayaan da'da ugu yar daaweynta taranka hormoonka ah iyo qalliinka sida ugu hooseeya ee suuragalka ah.
Maqaallada Walt Heyer ee Khudbadda Dadweynaha.
Walt wuxuu qoray tiro ama qodobo loogu talagalay Khudbadda Dadweynaha ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa transgender.
Asal ahaan waxay ka soo muuqdeen Maqaalka Dadweynaha: Akhlaaqda, Sharciga, iyo wanaagga guud, joornaalka tooska ah ee machadka Witherspoon ee Princeton, NJ waxaana dib loo daabacay fasax.
Maqaallada Walt Heyer ee Federalist-ka
Walt wuxuu u qoray tiro ama maqaal u ah Federalist-ka dhaqdhaqaaqa transgender.
Maqaallada Walt Heyer ee Calaamadaha Maalinlaha ah.
Walt wuxuu u qoray tiro ama qodobo Calaamadaha Maalinlaha ah ee dhaqdhaqaaqa transgender.
Walt Heyer wuxuu wax ka qoraa noloshiisa cunug isku wareersan ilaa gabadh iyo haweeney gadaal u socota.
Maqaalkaan oo si muuqata loogu daabacay USA Maanta:
Si loo taageero tuugada Walt waxay abuurtay degel internet oo dhameystiran oo leh qoraalo, sheekooyin iyo buugaag.